Mipiro yekukumikidza tebhenekeri (1-89)
7 Zuva rakapedza Mozisi kumisa tebhenekeri,+ akaizodza+ ndokuitsvenesa, pamwe chete nezvekushandisa zvayo zvese, atari, nemidziyo yayo yese.+ Paakanga azodza uye atsvenesa zvinhu izvi,+ 2 machinda aIsraeri,+ vakuru vedzimba dzemadzibaba avo, akapa mupiro. Machinda aya emadzinza aitungamirira pakuverengwa kwevanhu 3 akauya pamberi paJehovha nemupiro wawo, wengoro 6 dzakanga dzakafukidzwa uye mombe* 12, machinda maviri aine ngoro imwe chete uye muchinda mumwe nemumwe aine mombe yake;* uye akauya nazvo pamberi petebhenekeri. 4 Jehovha akati kuna Mozisi: 5 “Gamuchira zvinhu izvi zvavari kukupa, nekuti zvichashandiswa pabasa retende rekusanganira, uye unofanira kuzvipa vaRevhi, maererano nezvinoda kushandiswa nemumwe nemumwe pabasa rake.” 6 Saka Mozisi akagamuchira ngoro dzacho nemombe dzacho, akazvipa vaRevhi. 7 Akapa vanakomana vaGeshoni ngoro mbiri nemombe ina maererano nezvaida kushandiswa pamabasa avo;+ 8 uye akapa vanakomana vaMerari ngoro ina nemombe 8 maererano nezvaida kushandiswa pamabasa avo, vari pasi paItamari, mwanakomana wemupristi Aroni.+ 9 Asi haana chaakapa vanakomana vaKohati, nekuti mabasa avo aiva epanzvimbo tsvene+ uye vaitakura zvinhu zvitsvene pamapfudzi avo.+ 10 Saka machinda akauya nemupiro wawo pakakumikidzwa*+ atari pazuva rayakazodzwa. Machinda paakapa mupiro wawo ari pamberi peatari, 11 Jehovha akati kuna Mozisi: “Pazuva rimwe nerimwe pachava nemuchinda mumwe chete anouya nemupiro wake wekukumikidza atari mumwe achizoteverawo pazuva rinotevera.” 12 Akatanga kuuya nemupiro wake pazuva rekutanga aiva Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi wedzinza raJudha. 13 Mupiro wake waiva dhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri* 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,*+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;*+ 14 kapu imwe chete yegoridhe* yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 15 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 16 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 17 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waNashoni mwanakomana waAminadhabhi.+ 18 Pazuva rechipiri, Netaneri+ mwanakomana waZuari, jinda raIsakari, akauya nemupiro wake. 19 Akauya nemupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 20 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 21 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 22 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 23 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waNetaneri mwanakomana waZuari. 24 Pazuva rechitatu, Eriyabhi+ mwanakomana waHeroni, jinda revanakomana vaZebhuroni, 25 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 26 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 27 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 28 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 29 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waEriyabhi+ mwanakomana waHeroni. 30 Pazuva rechina, Erizuri+ mwanakomana waShedheuri, jinda revanakomana vaRubheni, 31 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 32 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 33 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 34 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 35 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waErizuri+ mwanakomana waShedheuri. 36 Pazuva rechishanu, Sherumieri+ mwanakomana waZurishadhai, jinda revanakomana vaSimiyoni, 37 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 38 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 39 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 40 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 41 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 42 Pazuva rechi6, Eriyasafi+ mwanakomana waDheueri, jinda revanakomana vaGadhi, 43 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 44 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 45 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 46 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 47 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waEriyasafi+ mwanakomana waDheueri. 48 Pazuva rechi7, Erishama+ mwanakomana waAmihudhi, jinda revanakomana vaEfremu, 49 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 50 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 51 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 52 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 53 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waErishama+ mwanakomana waAmihudhi. 54 Pazuva rechi8, Gamarieri+ mwanakomana waPedhazuri, jinda revanakomana vaManase, 55 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 56 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 57 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 58 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 59 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 60 Pazuva rechi9, Abhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai, jinda+ revanakomana vaBhenjamini, 61 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 62 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 63 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 64 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 65 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 66 Pazuva rechi10, Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai, jinda revanakomana vaDhani, 67 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 68 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 69 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 70 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 71 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waAhiezeri+ mwanakomana waAmishadhai. 72 Pazuva rechi11, Pagieri+ mwanakomana waOkrani, jinda revanakomana vaAsheri, 73 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 74 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 75 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 76 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 77 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waPagieri+ mwanakomana waOkrani. 78 Pazuva rechi12, Ahira+ mwanakomana waEnani, jinda revanakomana vaNaftari, 79 akapa mupiro wake wedhishi rimwe chete resirivha rairema mashekeri 130 uye ndiro imwe chete yesirivha yairema mashekeri 70 maererano neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvese zvakazara nefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta kuti ive mupiro wezviyo;+ 80 kapu imwe chete yegoridhe yairema mashekeri 10, yakazara nerusenzi; 81 mukono wemombe mudiki mumwe chete, gondohwe rimwe chete, uye gwayana gono rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chinopiswa;+ 82 mbudzana imwe chete yechibayiro chechivi;+ 83 uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, nemakwayana makono mashanu ane gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro cherugare.+ Uyu ndiwo waiva mupiro waAhira+ mwanakomana waEnani. 84 Uyu ndiwo waiva mupiro wekukumikidza+ atari payakazodzwa wakabva kumachinda aIsraeri: madhishi 12 esirivha, ndiro 12 dzesirivha, kapu 12 dzegoridhe;+ 85 dhishi rimwe nerimwe resirivha richirema mashekeri 130, uye ndiro imwe neimwe ichirema mashekeri 70, midziyo yacho yese iri yesirivha inorema mashekeri 2 400 maererano neshekeri renzvimbo tsvene;+ 86 kapu 12 dzegoridhe dzakazara nerusenzi, kapu imwe neimwe ichirema mashekeri 10 maererano neshekeri renzvimbo tsvene, goridhe rese remakapu acho richirema mashekeri 120. 87 Mhuka dzese dzechibayiro chinopiswa dzaiva mikono yemombe 12, makondohwe 12, makwayana makono 12 ane gore rimwe chete uye mipiro yazvo yezviyo, nembudzana 12 kuti dzive chibayiro chechivi; 88 uye mhuka dzese dzechibayiro cherugare dzaiva mikono yemombe 24, makondohwe 60, nhongo 60, uye makwayana makono 60 ane gore rimwe chete. Uyu ndiwo waiva mupiro wekukumikidza+ atari pashure pekunge yazodzwa.+ 89 Pese paipinda Mozisi mutende rekusanganira kuti ataure naMwari,*+ ainzwa inzwi richitaura naye richibva pamusoro pechekukwidibirisa+ areka yeChipupuriro, pakati pemakerubhi+ maviri; uye Mwari aitaura naye.
^ Kana kuti “majon’osi,” kureva mombe dzinobopwa.
^ Kana kuti “jon’osi rake.”
^ Kana kuti “pakatsaurirwa.”
^ Kana kuti “ndiro diki.”
^ ChiHeb., “naye.”